यौन व्यवसायमा बालिकाः को छ जिम्मेवार ?
काठमाडौं, मंसिर १८ । देशकै मुटु राजधानी सहर, धेरै मानिसको सपनाको सहर काठमाडौं । यहाँको जिवनशैली र सुविधाले आर्कषित नहुने विरलै होलान् । गाँउको दुखलाई पर सार्दै सहरी सुविधा प्राप्तिका लागि अस्थायी रुपमा राजधानी प्रवेश गर्नेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ ।
गरिबी, लैंगिक विभेद, घरेलु हिंसा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा पहुँच नहुनु, पितृसतात्मक सामाजिक संरचना, सामाजिक कुरिति, छुवाछुत जस्ता कारण सँगसँगै सहरी सुविधाभोगप्रति बढ्दो अपेक्षाको कारण मानिसहरु ग्रामिण भेगबाट सहर केन्द्रित हुन थालेका हुन् । ग्रामिण क्षेत्रबाट सहरप्रति बढ्दो आकर्षणलाई पछिल्लो एक दशकमा बालबालिकाको असुरक्षित आप्रवासनले उनीहरु उच्च जोखिममा रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ ।
पारिवारिक कलह, घरेलु हिंसा, आर्थिक समस्या, पढाईप्रतिको चासो घट्नु, आँफू सरहको साथीको सहरी जीवनसँग आफ्नो जीवनको तुलना गर्नु, परिवारका सदस्यले बेवास्ता गर्नु, परिवारसँगको झगडा पश्चात आफूलाई अव्बल सावित गर्न घर छोड्नु, नयाँ ठाँउमा पुग्ने र पैसा कमाउने रहर जाग्नु, आफ्नो परिवारको उज्ज्वल भविष्यको सपना देख्नु आदि कारणले गर्दा उपत्यकामा १८ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालिकाहरु वर्षेनी सैयौंको संख्यामा आउने गरेको र उनीहरु जोखिमयुक्त कार्यमा संलग्न रहेको पाईएको छ । यस्ता बालबालिकाहरुलाई सहरसम्म ल्याई पु¥याउनको लागि प्रभाव पार्ने व्यक्तिका रुपमा आफ्नै नजिकका साथी, आफन्त, छिमेकी र अन्जान व्यक्तिको भूमिका रहने गरेको छ । उनीहरुले बालबालिकालाई काम गर्ने ठाँउमा खाना, बस्न सुविधा सँगै पैसा समेत दिने र कुरा बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यकाको विशेषगरी कलंकी, गोंगबु, ठमेल, रत्नपार्क लगायत बसपार्क आसपासका क्षेत्रमा खोलिएका साना खाजा घर, क्याबिन तथा रेष्टुरेण्ट एण्ड बार, गेष्ट हाउस, दोहोरी साँझ, मसाज पार्लरहरुमा पछिल्लो समय बालबालिकाको प्रयोग बढ्दो पाइन्छ ।
काठमाडौंको महंगो बसाइ त्यसमाथि साथी र आफन्तले पनि धेरै दिन मद्धत गर्न नसक्ने अवस्था हुनु साथै आफूमा केही सीप नहुँदा आर्थिक समस्या बढ्दै गएपछि कामको खोजी गर्ने क्रममा खाजाघर, गेष्टहाउसमा सजिलै काम पाइने गरेको कुरा बालिकाहरु बताउँछन् । उपत्यकाको आसपासमा रहेका अधिकांश खाजा घर, क्याबिन तथा रेष्टुरेण्ट एण्ड बार, गेष्ट हाउस, दोहोरी साँझ, जसलाई मनोरन्जनको क्षेत्रको रुपमा समेत व्याख्या गरिएको छ । उक्त स्थानहरुमा काम गर्नका लागि भनी आएका वा ल्याइएका बालिकाहरुलाई सुरुवातको केही समय सफाई, वेटर, रिसेप्सनिस्ट जस्तो काममा लगाउने गरेको र बिस्तारै बिस्तारै ग्राहकहरु सँगै बसेर मदिरा लगायत खाने कुराको सेवन गर्न लगाउने र ग्राहकको ईच्छा बमोजिम आफ्नो शरिर नै सुम्पिन बाध्य हुनु परेको यस क्षेत्रमा संलग्न बालिकाहरु बताउँछन् ।
यस्तो कार्यमा संलग्न हुन नचाहने अधिकांश बालिकाहरुलाई सुरुवातका समयमा उनीहरुकै कार्यस्थलमा मालिकले जबरजस्ती यौन सम्पर्क राख्ने गरेको समेत पाइएको छ । सुरुमा आफ्नो शरिर सुम्पिन डर मान्ने बालिकाहरु समेत आफ्ना साथीको आड पाएपपछि बिस्तारै खुल्दै जाने गरेको, डर हटाउन लागू औषध र मदिराको सेवन गर्ने गरेको पनि पाइन्छ ।
खासगरी आफैँले कमाएर परिवारको गुजारा चलाउनुपर्ने अवस्थामा रहेका बालबालिकाले यौनकार्यलाई सजिलो माध्यमको रुपमा लिनेगरेको पाइएको छ । सुरुमा काठमाडौंमा बाँच्नकै लागि उक्त पेशा अंगालेको र हाल सोही काम सजिलो लागेर गरेको बताउने बालिकाको संख्या धेरै छ । यस्ता कार्यमा ८ वर्षदेखिका बालिकाको संलग्नता रहेको पाइएको छ । बालिकाहरुले यौनकार्यको थलोको रुपमा गेष्टहाउसहरुको प्रयोग गर्ने पाइन्छ । उक्त कार्यमा ग्राहकको खोजीको लागि उपत्यकाको विशेषगरी बसपार्क र धेरै मानिसहरु आवतजावत हुने आकाशे पुललाई आधार बनाइएको पाइएको छ । आकाशे पुललाई मोलमोलाई गर्ने स्थलको रुपमा प्रयोग गर्ने, मोलमोलाई पश्चात ग्राहकको सम्पर्क नम्बर लिएर फोन सम्पर्कको माध्यमबाट केही समयमै गेष्टहाउस पुग्न सहज हुने कुरा उक्त कार्यमा संलग्न बालिकाहरु बताउँछन् ।
यस क्षेत्रमा विशेषगरी धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, गोरखा, चितवन, सिन्धुपाल्चोक जस्ता ग्रामिण भेगका साथै उपत्यकाकै केही स्थानीय बालिकाको समेत संलग्नता पाइएको छ । यस्ता बालिकाहरुमा जनजाति, दलित, ब्राम्हण क्षेत्री क्रमशः रहेको पाइएको छ । बालिकाहरुलाई ग्राहक मिलाईदिने काम भने आफ्नै साथी, प्रेमी, श्रीमानले समेत गर्ने गरेका छन् । पुराना ग्राहकको सम्पर्क हुँदै आउने ग्राहक, फेसबुक र साईबरको मद्धतले पनि ग्राहकलाई सजिलै सम्पर्क गर्न मद्धत गरेको छ । दिउसोको समयमा बालबालिकाले एउटा ग्राहकसँग एक पटक मात्र यौन सम्पर्क राख्दा कम्तिमा रु ५०० देखि १५०० सम्म लिने गरेको बताएका छन् । ग्राहकले पहिलो चोटी दिएको रकममै पुनः यौन सम्पर्कको लागि अनुरोध गर्ने गर्दाको अवस्थामा नमान्दा अश्लिल गाली एवं दुव्र्यवहार समेत गर्ने गरेको तितो यर्थाथ उनीहरुसँग रहेको छ । यौन कार्यको लागि गेष्टहाउसको कोठा प्रयोग गरेबापत ग्राहकले एक पटकको लागि रु ३५० देखि रु ४५० सम्म गेष्टहाउसलाई बुझाउनुपर्ने रहेछ ।
औसतमा एक बालिकाले दिनमा ५ जनासँग सम्बन्ध कायम गर्ने गरेको पाइएको छ । रातभरको समयको लागि भने औसतमा प्रति ग्राहक रु ५००० लिने गरेको उक्त कार्यमा संलग्न बालिकाहरु बताउँछन् । अस्थायी साधनको प्रयोगको लागि गेष्टहाउसबाटै तोकिएको शूल्कमा खरिद गर्नुपर्ने र उक्त साधन मेडिकलमा भन्दा धेरै महङ्गो पर्ने गरेको बालिकाहरु बताउँछन् । बालिकाहरुले आफ्नो प्रेमि÷श्रीमान्सँग भने अस्थायी साधनको प्रयोग विना नै यौनसम्पर्क गर्ने गरेको पाइएको छ । यौन कार्यमा संलग्न बालिकाहरुमा महिनावरीमा अनियमितता हुने, तल्लो पेट दुख्ने, योनी चिलाउने, वरपरको भाग सुन्निने, दुख्ने, सेतो पानी बग्ने र घाउखटिरा आउने समस्या पाइएको छ ।
यस्तो समस्या आउँदा पनि उनीहरु मेडिकल वा अस्पतालमा जान लाज मान्ने बरु दुखाइ सहेरै बस्नसक्ने बताँउछन् । बालबालिकाले गेष्टहाउसलाई यौनकार्यको लागि सुरक्षित स्थान रहने गरेको बताएका छन् । गेष्टहाउसमा प्रहरीको चेकिङ पनि कम हुने, चेकिङ हुनुअघि नै जानकारी समेत हुने गरेको र चेकिङ भइहाले पनि चेकिङको क्रममा प्रहरीले सोधेमा श्रीमान्–श्रीमती हो भन्न गेष्टहाउसको संचालकले सिकाउने गरेको, उमेर बढाएर भन्न लगाउने र प्रमाणको लागि भनी सिन्दुर पोते सहित बालिकालाई मेकअप गरेर बस्न लगाउने गरेको पाईएको छ ।
ठमेल आसपासका क्षेत्रमा संचालन भएका गेष्टहाउसहरुमा भने सि.सि.टि.भी द्धारा संचालकले प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने गरेको त्यहाँ संलग्न बालिकाहरु बताउँछन् । यसले उनीहरुलाई पुलिसको चेकिङबाट बचाउन मद्धत गरेको देखिन्छ । गेष्टहाउसको मालिकले अनपेक्षित गर्व रहन गएम आफैले गर्भपतनको लागि लिएर जाने गरेको सो पेशामा संलग्न बालिकाहरु बताँउछन् । गेष्टहाउसमा बालिकाले ग्राहक विना कोठा लिएर बास बसे बापत भने प्रति रात रु ५०० बुझाउनुपर्ने रहेछ । गेष्टहाउसमा आफूसँगै बास बस्ने साथीले आफ्नो सामानहरु चोरीदिँदा झगडा पर्ने र सामानको सुरक्षा नहुने हुँदा उनीहरु बाध्य भएर गेष्टहाउस संचालकप्रति विश्वास गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।
यसो हुँदा हुँदै नियमित रुपमा गेष्टहाउसमा ग्राहक लिएर आउन नसक्ने अवस्थामा भने बालिकालाई अश्लिल गाली गरी गेष्टहाउसबाट हटाइदिने गरेको पाइएकोछ । बालिकाले दैनिक यौनकार्यमा संलग्न भएपश्चात आर्जित रकम गेष्टहाउसको मालिकलाई विश्वासको आधारमा राख्नदिने पनि पाइन्छ । उनीहरु आफूलाई आवश्यक परेको बेला मालिकसँग सो पैसा माग्ने गरेको र नपुगेको अवस्थामा सापटी समेत लिने गरेको बताउँछन् । आफूले कति कमाएर राख्न दिएको छ भन्ने कुरा अन्दाजमा भन्दा बाहेक कुनै हिसाबकिताव उनिहरुसँग छैन । यौनकार्यको लागि ग्राहक नपाएको खण्डमा भने ट्रकको सहारा लिएर बालिकाहरु मुग्लिन, नारायणघाट लगायतको स्थानमा पुग्ने गरेका छन् ।
उनीहरुलाई उक्त स्थान सम्म पु¥याउन मद्धत गरेबापत चालक, सहचालकले टक«मै यौन सम्पर्क गर्नेगरेको पनि पाइन्छ । कतिपय बालिकालाई भने आफ्नै परिवारका सदस्यले कमाउनको लागि यौन कार्य नै गर्न बाध्य बनाउने गरेको पाइन्छ । बालिकाहरु सुरुमा बाध्यात्मक रुपमा सो पेशामा संलग्न भएता पनि पछि अधिकांश बालिकाहरु आम्दानिको सरल बाटो भएको भनी स्वेच्छाले उक्त कार्यमा संलग्न भएको पाइएको छ ।
उनीहरुका यौनसाथीको उमेर भने १३ वर्षदेखि ६५ वर्षसम्मको पाइन्छ । बालिकाहरुले दिएको जानकारी अनुसार हाल १८ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका धेरै बालिकाहरु सडकमा आधारित यौन व्यवसायमा संलग्न भएको पाइन्छ । ग्राहकको खोजी गर्दै नयाँ ठाउँमा जाने क्रममा पहिले देखि नै त्यस ठाँउमा यौन कार्यमा संलग्न महिला तथा बालिकाहरुले उनीहरुलाई दुव्र्यवहार गर्ने पाइएको छ । यस कार्यमा संलग्न कतिपय बालिकाको प्रेमी आफू भन्दा ठूलो उमेर समूहको यूवाहरु हुने गरेको पाइन्छ । उनीहरुले बालिकाको विश्वास जित्दै, विवाह गर्ने आश्वासन दिई कमाएको अधिकाशं रकम लैजाने, यौनसम्पर्कको लागि समेत प्रयोग गर्ने, आफू केही पनि काम नगर्ने र बालिकाले कमाएको धेरैभन्दा धेरै रकम लिन खोज्ने र कमाएर ल्याउन नसके अनेक बहाना बनाइ छोड्दिने गरेको बालिकाहरु बताँउछन् ।
यसरी छोडिएको केही समय नबित्दै पुन नयाँ प्रेमी बन्ने गरेको र यो प्रक्रिया पुनरावृत भइरहने उनीहरुको भोगाइ छ । कतिपय बालिका भने आफ्नो प्रेमीसँग विवाह गरेर गेष्टहाउसमै छुट्टै कोठा लिएर बस्ने गरेको, आफ्नो श्रीमान्ले नै ग्राहक खोजिदिने, मोलमोलाई गर्ने, ग्राहकबाट प्राप्त रकम लिने गरेको, बिरामी हुँदा र गर्भवती हुँदा समेत ग्राहकसँग बस्न बाध्य बनाउने र नमानेको अवस्थामा निर्मम तवरले कुटपिटसँगै जबरजस्ती यौनसम्पर्क समेत राख्ने गरेको पाइएको छ । आफ्नो उमेर समूहका धेरै बालिका लगायत महिलालाई भने हाल गेष्टहाउसको संचालकले फूलटाईम स्टाफको रुपमा भनी गेष्टहाउसको कोठा कोठामा यौनकार्यको लागि तयारी अवस्थामा राख्ने गरेकोर ग्राहकको क्षमता र ईच्छा हेरेर सोही अनुसारको कोठा उपलब्ध गराउने गरेको समेत उनीहरु बताउँछन् ।
सडकमा मोलमलाईमा संलग्न हुँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले लिएर जाने क्रममा प्रहरी स्वयम्ले फोन नम्बर माग्ने, अभद्र व्यवहार समेत गर्ने गरेको कुरा समेत बालिकाहरु बताउँछन् । बालिकालाई सडकबाट सेल्टर होमसम्म प्रहरीले लग्ने क्रममा अधिकांश बालिका केही दिन नबित्दै त्यहाँ बाट भागेर पुन सडकमा आईपुगेको पाईएको छ । उनीहरुलाई सेल्टर होम्समा सबै व्यवस्था राम्रो भए पनि बन्धनमा बाँधिएको अनुभूति भएको हुँदा भाग्नुपरेको बताँउछन् । मनोरन्जन क्षेत्रमा भर्खर प्रवेश गरेका बालिकामा भन्दा बाहेक यौन कार्यमा संलग्न अधिकांश बालिकामा आफूले गरिआएको पेशा परिवर्तन प्रति कुनै चासो नरहेको पाउन सकिन्छ । उनीहरुलाई आफूले गरिरहेको काम गलत हो भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि अन्य पेशामा यसमा जति पैसा कमाउन सहज नहुने अवस्था हुँदा पेशा परिवर्तन गर्न मन नलाग्ने बताँउछन् । उनीहरु खुलेर यसो भन्छन्, ‘काठमाडौंको बसपार्क, कलंकी, गोंगबु, रत्नपार्क लगायत खाजा घर, क्याबिन रेष्टुराँ तथा गेष्टहाउसमा राम्रो नियत भएका मानिसहरु जाँदै जाँदैनन् । प्रायजसो सबै स्थानमा यौन कार्य भइरहन्छ, हामीले काम गरेको हरेक ठाँउमा देखेका छौँ ।’ यसरी उनीहरुसँगको निरन्तर भेटघाट एवं संवादपछि यस्तो लाग्छ, यही रफ्तारमा बालिकाको संलग्नता बढ्दै गए उनीहरुको भविष्य अन्धकारमा फस्दैछ ।
१८ वर्ष मूनिका बालिकाको स्विकृतिमै यौनसम्पर्क भए पनि बलात्कार मानिने कानूनी प्रावधान हुँदा हुँदै किन बाध्य बनाईँदैछ आखिर बालिकाहरु यौन उपभोगको सामाग्रिको रुपमा ? मनोरन्जन क्षेत्र आन्तरिकसँगै बाह्य बेचविखनको लागि स्रोतको रुपमा विकास हुँदै गएको अवस्थामा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट समेत विभिन्न प्रयत्न एवं सुधारात्मक कार्य भइरहेका छन् ।
तैपनि यी प्रयास पर्याप्त छैनन् । बालबालिकाको स्रोत जिल्लामा जनचेतनामूलक एवं जीविकोपार्जन, आयमूलक कार्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम व्यापक रुपमा गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ । जसले बालबालिकाको असुरक्षित आप्रवासन सँगसँगै सम्भावित जोखिमबाट बचाउन मद्धत गर्छ ।
काम गराउने बहानामा बालबालिकाहरु यौन उपभोगका साधनको रुपमा प्रयोग भईरहेको हुँदा १८ वर्षमूनिका बालबालिकालाई मनोरन्जन क्षेत्रमा कार्य गर्न प्रतिवन्ध लगाईनुपर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुको राय छ । अथवा यस्ता क्षेत्रलाई व्यवस्थित र शोषणरहित बनाउनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।
मनोरन्जन क्षेत्रलाई मर्यादित पेशाको रुपमा प्रर्वद्धन गर्न सक्ने वातावरणको सृजना गर्न मनोरन्जन क्षेत्रका संचालकले यस संग सम्बन्धित व्यवसायलाई कानुनी रुपमा अनिवार्य दर्ताको प्रकृयामा लैजानुपर्छ र कार्यस्थलमा श्रमिकको अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । मनोरन्जन क्षेत्रलाई वर्तमान समाजले हेर्ने दृष्टिकोणको चिरफार गर्न त्यहाँ हुने गरेका विकृती एवं विसंगतिपूर्ण गतिविधिलाई रोक्ने मुख्य जिम्मेवारी भने संचालकले नै लिन सक्नुपर्छ । ति कामदार महिला तथा बालबालिकाको स्थानमा आफ्ना परिवारका सदस्यलाई राखेर हेर्न सक्ने सोचको विकास भई सोही अनुरुपको अनुकुल वातावरण तय गर्न सकेमा र ग्राहकले पनि शोषण गर्ने मनशाय नराखे मात्रै पनि श्रमिक महिलाले सम्मानजनक तवरले आफ्नो पहिचान नलुकाई काम गर्न सक्ने वातावरण बन्न सहज हुने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
बालबालिकालाई ललाईफकाई यौन कार्यमा संलग्न गराउनु गैरकानुनी र गम्भिर अपराध समेत भएको हुँदा यस्तो कार्य गर्ने र गराउने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिमको कारवाही गरिनुपर्छ । त्यसको लागि त्यहाँ भईरहेका र हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट नियमित रुपमा प्रभावकारी अनुगमन भइरहनुपर्छ । मनोरन्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिला तथा बालबालिकाको संख्याको एकिन तथ्यांक नभएको हुँदा यस विषयमा खोज एवं अनुसन्धान अझै आवश्यक छ ।
मनोरन्जन क्षेत्र आफैँमा गैरकानुनी होइन तर यहाँ हुने गरेका यौनजन्य कार्य र बालबालिकाको बढ्दो प्रयोगको कारण यहाँ कानुनले बर्जित गरेका कार्य लुकिछिपी भइरहन्छ । यसलाई मर्यादित एवं सम्मानित बनाउने संकल्प सम्बन्धित सबैले लिनुपर्छ ।